कृष्ण धरावासीको निबन्ध: इलाम र म ! - माइपोखरी न्युज
Home MAIPOKHARI NEWS कृष्ण धरावासीको निबन्ध: इलाम र म !
सात वर्षको उमेरमा मैले पहिलोपल्ट इलाम देखेको थिएँ । पहिलोपल्ट मोटर देखेको पनि त्यही बेला हो । मामोलकी हजुरआमाको पछि लागेर साँगरुम्बाबाट गएको थिएँ । एक दिन बालकमा झलक्क देखेको ठाउँबारे खासै धारणा बन्न सकेको थिएन । दोस्रोपल्ट वि। सं। २०३५ असारमा क्याम्पस पढ्नका लागि पुगेको थिएँ । बालककालमा कलिला पाइतालाले स्पर्श मात्र गरेको ठाउँमा निकै लामो समयसम्म बस्ने गरी जान पाएकोमा खुसी लागेकै थियो तर क्याम्पस भर्ना गर्ने बेलैमा भएको एउटा गल्तीले गर्दा मैले चार वर्षको ठाउँमा दुई वर्ष मात्र बस्न पाएँ ।
म किर्ते जग्गाधनीको स्रष्टा भएर दरबार र खेलमैदानहरू बेचिरहन सक्थेँ । भ्रष्टाचारका विरुद्ध सडकमा कडाकडा भाषण गर्दै गोप्य सम्झौताहरूका खेस्रा बेचिरहनेमध्येको एक शङ्काको घेरामा परिरहेको हुनसक्थेँ । मलाई जतै जान पनि बाटा खुला हुन सक्थे । म यीमध्ये कतै नगएर गाउँमा सुपारी खेती गरेर बसिरहेको पनि नहुन सक्थेँ र ? के म मन्दिर बनाउने, पुराण लगाउने, धामी, झाँक्री र ज्योतिषी चलाउने संस्थाको सल्लाहकार हुन नसक्दो हुँ रु म सामुदायिक वनको अध्यक्ष पनि त हुन सक्थेँ । पार्टीले चाहेको भए म आज इटहरी नपाकै मेयरै हुन पनि त कसले रोक्न सक्थ्यो होला र ।
नमिल्ने कुरा गर्नु नहुने हो मैले किनकि आईएड पढ्दा पहिला महिनाको डेढ सय र पछि दुई सयका दरले छात्रवृत्ति दिई एउटा फाराममा सही गराइएको थियो । त्यसमा स्पष्ट लेखेको थियो, पढिसकेपछि सरकारी विद्यालयमा अनिवार्यसँग पाँच वर्ष शिक्षण गर्नुपर्ने छ तर सात वर्षसम्म पढाउँदा पनि स्थायी जागिर हुनसकेको थिएन । शिक्षा पढेको मानिस बैङ्कमा जागिर खान जानु नहुने हो नियमले । गए पनि जागिर नदिनु पर्ने हो नियमले तर म बाठो थिएँ । मैले एसएलसीको प्रमाणपत्र मात्र पेश गरेर खरदार हात पारिहालेँ । त्यसपछि मेरो आईएडको प्रमाणपत्र र ज्ञानले कहिल्यै टाउको उठाउनु परेर । ती दुवै भूमिगत भए । म छात्रवृत्ति खाएर शिक्षा पढेको मानिस बैङ्कमा पुगेँ । बैङ्कमा पुगेर साहित्य लेख्न थालेँ । सबैले भ्रष्टाचार गर्न मिल्ने देशमा मैले मात्र किन नमिल्नु !
झापाबाट तिहीँ मास्तिर तीन घण्टाको बाटोमा पनि म बीस वर्षसम्म पुगिनँछु । सायद नभ्याएको होला ! कि त नभ्याएको नाटक पनि त हुनसक्छ । अलिक नाम चलेपछि शान बढेको पो थियो कि रु नभएको व्यस्तता देखाउने सभ्यतामा म मात्र असभ्य हुन पनि त मिलेन कि ।